Onye isi oche na -apụ dị ka Mekong World Tourism Day Forum Ugbu a na ọkwa ikpeazụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Onye isi oche na -apụ dị ka Mekong World Tourism Day Forum Ugbu a na ọkwa ikpeazụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kambodia • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ mgbasa ozi Laos • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Onye isi nchịkwa nke Mekong Tourism Coordinating Office Jens Thraenhart
Njem nlegharị anya Mekong na -aga Ọktọba na -arụsi ọrụ ike yana ihe omume abụọ dị mkpa iji mechie Jens Thraenhart ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asatọ nke onye ndu ga -abịa na njedebe na Ọktoba 15.
Mmemme a ga -egosi gụnyere gụnye mwepụta webụsaịtị ndị ahịa Mekong Collection ọhụrụ na ikenye atụmatụ Mekong Tourism Communications Plan.
Agụnyere gụnyere ọkwa nke nturu ugo Mekong Hero nke 2021 na oghere ikpeazụ nke akụkọ Mekong Innovations in Sustainable Tourism program (MIST).
Ndị a ga -abụ mmemme ikpeazụ maka Mekong Tourism site n'aka onye isi nchịkwa ugbu a.
Onye isi nchịkwa na -apụ apụ Jens Thraenhart kwuru, sị: "Ka m na -abịaru nso na njedebe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asatọ m dị ka onye isi nchịkwa nke Mekong Tourism Coordinating Office, enwere m obi anụrị isoro ndị otu obere anyị rụpụta ihe omume abụọ n'ọnwa Ọktoba."
Ndepụta ọrụ dị egwu a ga -egosi na mmemme abụọ a gụnyere mmalite nke mkpokọta Ahụmịhe Mekong ọhụrụ webụsaịtị ndị ahịa, biputere Mekong Tourism Communications Plan, ọkwa nke nturu ugo Mekong Hero nke 2021, na oghere ikpeazụ nke Mekong Innovations na Njem njem nlegharị mmemme (MIST) na -akọ akụkọ TTR kwa izu.
Thraenhart kwuru na "ha ga -abụ mmemme ikpeazụ m maka njem nlegharị anya Mekong, mana m ga -ejikọ ma nwee olile anya na m ga -akpọtụrụ gị niile."
Jens Thraenhart kwuru bụ aha ya a Dike njem site Network Tourism Network (WTN) . Ihe nrite a na-amata ndị gosipụtara onye ndu pụrụ iche, ihe ọhụrụ, na omume, Jens na-enwekwa ihe ịga nke ọma mgbe niile iji na-akwado njem nlegharị anya na agendas njem na-adigide, na-ewetara ndị SME na obodo ọhụhụ na uru, yana ịkekọrịta agendas na-aga n'ihu n'ọkwa ọha na nkeonwe. mmekọrịta.
TTR WEEKLY kwuru na mkparịta ụka maka nhọpụta onye isi nchịkwa ga -anọchi anya ga -aga na ekwentị maka mba isii iji kwenye na onye ga -eweghara Thraenhart.
Dị ka atụmatụ ahụ si dị, mba isii MTCO (Cambodia, China, Laos, Myanmar, Vietnam, na Thailand), kwesịrị ịkpọsa nhọrọ ha na Mgbakọ Mekong Ebe a ga-amalite na Ọktoba 21-22. Ụbọchị ikpeazụ Thraenhart nọ n'ọfịs MTCO atọrọ maka Ọktọba 15.
Ebe nzukọ Mekong World Tourism Day Ọktoba 6-7
Ihe omume mebere ahụ ga -egosipụta ndị ikpeazụ 2021 ndị asọmpi maka nsọpụrụ na Mekong Innovations kwa afọ na njem nlegharị anya na -adigide (MIST) & Ahụmịhe Mekong Showcases (EMS).
Ndị ga -emecha aha ikpeazụ ga -eme ọkwa ikpeazụ ha na ọgbakọ mebere, na -ewere ọnọdụ etiti iji gosipụta atụmatụ njem na -adigide na ụlọ ọrụ na -elekọta mmadụ.
Enwere ndị ikpeazụ 15 maka ihe ngosi Mekong Ahụmịhe 2021 sitere na Cambodia, Lao PDR, Thailand, Vietnam, na Guangxi na Yunnan na China. N'ihi ọnọdụ dị ugbu a na Mianmaa, kọmitii Mekong Tourism Advisory Group kpebiri ịmata azụmahịa niile edepụtara aha na Mianmaa dị ka Ahụmịhe Mekong Showcases.
Debanye aha n'efu ebe a.
Mgbakọ Mekong ebe njedebe Ọktoba 21-22
Ihe omume mebere ahụ ga -egosipụta ndị isi okwu dị ka onye nrụpụta ụlọ nkwari akụ Bill Bensley na onye nrụpụta mmetụta mmekọrịta ọha mmadụ Jimmy Pham, onye guzobere ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze nke Hanoi na onye nnata Ahụmịhe Mekong, KOTO (Mara Otu - kuzie Otu).
Ndị ọzọ na-ekwu okwu gụnyere onye mmeri nke MIST 2018, Aroun KKK nke Bamboo Lao, na MIST 2019 Finalist, Ros Rotanak nke Chef Nak nke Cambodia. Natalia Bayona, Director nke Innovation, Investment, na Mmụta nke World Tourism Organisation (UNWTO), na Steven Schipani, Onye Ọkachamara Nleta njem nlegharị anya nke Asia Development Bank (ADB) ga -ekwu okwu nnabata.
A ga-ahazi nzukọ a site na ụlọ nyocha Innovation na Sasin Business School na Bangkok-bssed University Chulalongkorn.
N'oge nnọkọ ahụ, onye isi oche kọmitii nhọrọ Mekong Heroes, Kobkarn Wattanavrangkul, onye bụbu Mịnịsta njem na egwuregwu, ga -ekwupụta onye meriri na nturu ugo Mekong Hero nke 2021.
Maka ozi ndị ọzọ na ịdebanye aha, gaa na ebe a.
A na -elekọta ụlọ ọrụ na -ahazi njem nlegharị anya Mekong (MTCO) n'ọfịs nke Ngalaba njem nlegharị anya nke Ministry of Tourism and Sports of Thailand, nke dị na Bangkok, wee jiri ego sitere n'aka gọọmentị isii nke Cambodia, China, Laos, Myanmar guzobe ya. , Vietnam, na Thailand, nke na-anọchite anya mpaghara mpaghara Greater Mekong (GMS).